Iji Apt-Pinning na Debian | Site na Linux
Iji Apt-Pinning na Debian
Alaghachila m Debian piakota. Ihe mere kpaliri m ịlaghachi na ngalaba anụ ụlọ nke Debian, (ebe ọ bụ na m na-eji Testing) abụwo ngosi ezighi ezi nke akwụkwọ edemede na-eji a kernel elu karịa mbipute 2.6.32-5-686.
Nsogbu kachasị na ịme ihe a bụ na m na-efufu ọtụtụ nchịkọta ndị dị na nchekwa nke Nyocha Debian na nke ahụ Debian lọ enweghị. Ihe Nlereanya nke ha bu FreeOffice 3.4.3 y Turpial.
Ọ dabara na Debian enwere nhọrọ Nke dabara adaba akpọ Nke dabara adaba na ị ga-eche ihe bụ maka ya? Ọfọn, na-enweghị na-aga n'ime oru igwe, na Nke dabara adaba Enwere m ike iji Debian piakota ma n'otu oge ahụ, nchịkọta nke Debian Wheezy. Ọ dị mma?
Kedu ka m ga-esi mee ya?
Ozugbo ịwụnye Debian piakota ma hazie ya, melite ya na ihe ndị ọzọ, ihe mbụ m na-eme bụ ịgbakwunye nchekwa nke Testing, yabụ faịlụ /etc/apt/sources.list dị ka nke a:
Emechaa m mepụta faịlị ahụ / wdg / apt / mmasị m tinye nke a n'ime:
Ugbu a, m na-emeghe ọnụ melite repositories.
Ugbu a mgbe m chọrọ ịwụnye Turpial dịka ọmụmaatụ enwere m ụzọ abụọ iji mee ya na njedebe:
Y APT ọ bụ ọrụ maka ịhọrọ naanị ihe ndabere dị mkpa nke otu nchekwa na nke ọzọ. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịmatakwu banyere nke a, ị nwere ike ịga njikọ a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » Iji Apt-Pinning na Debian
mmm na-adọrọ mmasị 🙂
M na-eji Debian Squeeze na PC ụlọ m ma data a baara m ezigbo uru. Ka anyị nwalee ya 🙂
Daalụ maka onyinye ị na-enye na blog gị.
PD = Enweghị m ike ịbanye njikọ ị tinyere na njedebe nke post ahụ, nke na-ezo aka na nzukọ esdebian.
Na-ejikọ si Cuba? Maka na ọ bụrụ otu ahụ, aga m agwa gị na anyị kpọchiri akpọchi na esDebian.
Abụ m onye ine Argentine 🙂 Ọ dị ka ihe nkesa esdebian adịghị n'ịntanetị n'oge post gị, yabụ enweghị m ike ịbanye ya ebe ahụ.
Na ifuru ha ka ha dokwuo anya:
Daalụ maka ozi ahụ, anyị (elav na m) enweghị ike ịnweta esDebian naanị n'ihi na anyị bi na Cuba, yabụ maka anyị ọ na-anọghị n'ịntanetị ma ọ bụ mechie haha.
Agbanyeghị ekele n'ezie, na ụzọ: «Welcome to our umeala site» 🙂
Naanị m gụrụ nke a: "anyị kpọchiri na esDebian."
Olee ihe jọgburu onwe ya, gịnị kpatara nke ahụ ji eme?
Ọ na-eme n'ihi na ọtụtụ ndị nzuzu si mba anyị (Cuba) banyere esDebian wee dee ụdị nzuzu ọ bụla, ya mere ... ndị isi nke esDebian choro maka "azịza" dị mfe maka ha, mana ha kagburu anyị karịa ... ha gbochiri ụzọ niile si Cuban IPs ¬_¬
Nke a bụ ihe na-akpasu m iwe, na ikike ha ewepu?
Mgbe m debanyere aha na esdebian, m ga-echere ụbọchị 5 iji biputere ma mgbe m gara biputere, ha na-ajụ m maka isi 5… Enweghị m mmasị na ya wee jụọ (jiri obiọma) onye nchịkwa ahụ jụọ m n'oge abụọ, anatara m azịza nzuzu na oge nke atọ m zigara ya m… M ka debanyere aha m: /
Ikwesiri ịtụle inye ọgbakọ ahụ nkwado na ịmepụta otu nhọrọ.M chere na na njem ahụ na ndị na-eso ụzọ gị, ọ gaghị esiri gị ike.
Site na ikike na ha bụ ndị nchịkwa ... enweghị ụzọ, ọ gafere mmiri, anyị ga-emerịrị ya na ihe ọ bụla. N'ezie, oge ikpeazụ m abanyela na ya bụ IP sitere na mba ndị ọzọ.
On give the forum a boost yep you are right, anyị dị na-echebeghị otu esi eme ya ma 🙂
N'ime echiche ole na ole, ihe mbụ ga - eme ka ọ nwekwuo nkwalite yana n'echiche ị nwere ike ịnweta ọnụnọ abụọ dị mkpa na ibe akwụkwọ ma gbanwee ihe ndị a kwuru na post na nnọkọ ahụ ... Ọ ga - enyekwa aka ịkọwapụta nkọwa nke nkọwa site na ụdị na okike na-eso na nnọkọ ahụ.
Anyị na-arụ ọrụ na… Ka osila dị, ọ bụrụ na mmadụ nwere ike ịdọrọ ụdọ iji nyere anyị aka na ọrụ ahụ, ọ ka mma. Ihe anyị chọrọ bụ otu esi enweta ozi site na FluxBB RSS ma bipụta ya na weebụsaịtị yana iji PHP.
Na-agbanwe ihe ndị a na nnọkọ ahụ, ọ ga-abụrịrị onye na-agụ ya ga-abụ nke na-akpaghị aka na kpamkpam, ma anyị ahụbeghị otu esi eme nke a do
O yiri ka http://www.esdebian.org agbadata ugbu a, site n'ụzọ enwere ụfọdụ hdp ma ọ bụrụ na ọ bụghị ọnụ ọgụgụ ka ukwuu na nnọkọ ahụ. Mgbe m na-eji debian, agara m na nnọkọ ahụ iji hụ ihe dị ọhụụ ma ha na-aza nzacha ndị ahụ mgbe niile. Jo m choro izere ịza ha karịa ịza azịza nke na-anaghị enyere ha aka na nke na-ewe m iwe ma ọ bụghị na m.
M gụnyere onwe m. Otu mgbe m jụrụ a na-adịghị-noob ajụjụ, na ha gwara m na m bụ onye nzuzu, naanị n'ihi na m nwere mkpokọta a adụ (Anaghị m echeta nke, Echere m na ọ bụ Squid) na ụfọdụ kpọmkwem kwa…-abịa na adịghị ịghasa m! ọ bụrụ na ọ bụ ụfọdụ ihe nzuzu, m na-anabata ha, na-akatọ gị, ma ewerekwala onye ọ bụla.
Ọ bụrụ na anyị gbakwunye na nke ahụ ruo oge IP si Cuba (ebe elav na m bi) ekweghị ịbanye na saịtị ahụ, ha enwetala ịjụ m ¬_¬
Ọtụtụ ozi bara uru, ee, mana nkwurịta okwu na-adịghị mma na m na-etinye oge dị ukwuu.
Enwere ndị maka ihe niile na nnọkọ a, ahụla m ka ndị mmadụ na-ekwu okwu ọjọọ gbasara ọgbakọ ahụ na ndị ọzọ na-ekwu nke ọzọ. Amaghim ya, mana amam forums ebe oburu na inaghi “pro” ha agaghi aza gi, dika Foro MTB.
Na Ogige Nzuzo? Ọ dị ka ndị ajọ mmadụ mana… Kedu ihe ga - eme ma m banye ebe ahụ?
Ọ bụ ya mere m ji etipịa ndị mmadụ site na mail, ebe ahụ anyị nwere Malcer na igbe mbata zuru ezu nke ozi ịntanetị n'aka m, ma ọ bụ Jabba, ụfọdụ n'ime ha na-eziga otu oge iji gaa nke ọzọ na KZKG ^ Gaara (M na-ekwu ndị dị oke njọ, ọ bụghị ndị nke bọl).
Ọ kaara onye ọ bụla mma?
N'ihe banyere nzukọ dị ka ndụ n'onwe ya, enwere "ndị mmadụ" kwesịrị iche na ha bụ onye, ​​na ha chọkwara karịa ndị ọzọ.
Ha na-enwe ọ theụ na atụnyere ikekwe naanị ikike ha nwere, ọ na-atọ ha ụtọ ịkụkụ ma ọ bụ ịpịa aka na ndị ọgbọ ha n'ihi na ọ bụ ụzọ ha si bụrụ mmadụ.
Ha anaghị enyekwu, ka anyị jụọ elm maka ube.
Zaghachi José Miguel
Ọ bụ eziokwu na ihe ị na-ekwu. Ọ dịghị mgbe m nwara ịjụ ihe ọ bụla maka ụjọ azịza oge na-adịghị anya. O yiri ka ha na-echefu na ọ bụrụ na ọ bụ sistemụ arụmọrụ zuru ụwa ọnụ ha kwesịrị imeghe ọbụna ndị ọhụrụ jojojojojojo
Mana ekwesịrị ikwenye na na wiki na ọgbakọ esdebian ị ga-achọta azịza nke ihe niile ịchọrọ.
hahahaha kedu ihe, ọ bụrụ na ị nwetaghị azịza na-enye aka, ọ bụ ezie na na archwiki na ọgbakọ ya ọ bụ maka m otu ihe ahụ ma ọ bụ ka mma, nye ndị nọ na-ajụ ihe doro anya, ha na-etinye njikọ ahụ kpọmkwem na wiki ahụ ma ọ bụ na ha na-enye azịza jiri obi ebere na ha na-arịọ gị ka ị chọọ wiki ma ọ bụ nnọkọ ahụ, nke ọma, kama ịtụ ahịa, ha na-atụ aro ya maka nsogbu / ajụjụ / obi abụọ n'ọdịnihu.
Nke a na post bụ nnọọ uru, ma ọ bụrụ na anyị kwesịrị wụnye ngwa dị ka ndị ahụ e kwuru. M ga-eri ahụ <° LINUX ma ọ bụrụ na ha gaa n'ihu na-eziga na GNU / Linux Debian.
Riri? Nke ahụ bụ echiche LOL !!!
Ọ bụrụ na ị bụ onye Debian, ana m akwado ka ị chọọ akara Debian anyị, ị nwekwara ike ịlele isiokwu LMDE (Linux Mint Debian Edition), nke n'ikpeazụ ka bụ Debian 😉
Ọ dịghị ihe na ọ aụ mara na ọdịnaya anyị masịrị gị, n'ezie ... ọ bụ ihe na-akasi obi 🙂
Ọ bụrụ na ị nwere obi abụọ ma ọ bụ ajụjụ, echiche, mkpesa ma ọ bụ ntụnye, mee ka anyị mara, ọ dị mma, lee, anyị niile dị ka ndị enyi ma anyị na-enyere ibe anyị aka ^ _ ^
Anyị ga ahụ ma ọ bụrụ na ahụ riri m ahụ nke ukwuu ... Ihe riri ahụ bụ ihe ọjọọ haha ​​ma ọ bụrụ na m na-eme ihe ọjọọ n'ihi ha ana m ata gị ụta hahaha
Daalụ! Achọlarị m mkpado, mana m ga-achọ ilekwasị anya na GNU / Linux Debian, ọkacha mma Lenny ma ọ bụ Squeeze
Ekele na blog! ha gara n'ihu otu a ...
Kwere m na anyị ga-enwe nke a, m na-ejikarị Debian, ana m eji Debian yana site na ihe m hụrụ, m ga-eji Debian :)
Ọ bụ ngosipụta ezighi ezi nke font na-eji kernel dị elu karịa mbipute 2.6.32-5-686.
Amaghị m na font ma ... ọ bụ n'ezie na ihe ọjọọ?
Mgbe m na-ezo aka na typeface, m na-ekwu maka aha ederede Text. Ee ee, kwenye m na ọ jọgburu onwe ya, na blọọgụ gara aga m kwuru ntakịrị ihe gbasara isiokwu ahụ ma hapụ ụfọdụ onyonyo nke etu esi gosipụta ederede ederede. Ọ fọrọ nke nta ka ọ ghara ikwe omume ịgụ mgbe ụfọdụ.
Hapụ m njikọ ahụ, ọ bụ na m na-achọkarị ịma
Mgbe m na-ezo aka na ndenye ihe ederede, m na-ekwu maka aha ederede Ederede
Adịghị m "laa azụ"
: ~ # apt-enweta wụnye turpial / ule
Agụ ndepụta ngwugwu ... Emela
Mepụta osisi ịdabere
Agụ ọkwa ọkwa ... Emela
Họrọ ahịrị "1.5.0-1" (Debian: ule [niile]) maka "turpial"
Can nwere ike instal ụfọdụ mkpọ. Nke a nwere ike ịpụta na
ị rịọrọ maka ọnọdụ na-agaghị ekwe omume ma ọ bụ, ọ bụrụ na ị na-eji nkesa
ejighị n'aka, na e mebeghị ụfọdụ nchịkọta ndị dị mkpa ma ọ bụ nwee
Ebupuru nke abata.
Ihe omuma ndia gha enyere aka idozi onodu a:
Nchịkọta ndị a enweghị nkwado:
turpial: Dabere: eke-gtk2 (> = 2.12.0) mana ọ gaghị arụnye
Dabere: Python-notify (> = 0.1.1) mana ọ gaghị awunye
Na-adabere: Python-gst0.10 ma ọ gaghị arụnye
Dabere: Python-webkit (> = 1.1.2) mana ọ gaghị arụnye
Dabere: eke na-gtkspell ma ọ gaghị wụnye
E: Ngwunye ngwugwu
N'otu aka ahụ, ọ bụrụ ngbalite nkwalite dị mma ma nwee nghọta ma ọ bụ nweta apt-nweta nkwalite… dọọ aka na ntị ka ị budata karịa 500mb, m na-ekwu iji melite distro… nwere ike ị nwere ike ịkọwa ihe karịa gbasara apt-pinning, yana maka nsogbu ahụ nke ngwugwu mebiri Kedu ihe m nwere? Daalụ nke ukwuu n'ọdịnihu
Gosi m faịlụ gị / wdg / apt / mmasị na /etc/apt/sources.list n'ihi na ọ na-arụ ọrụ m enweghị nsogbu. Ugbu a, a na m achota, nke a dabara adọnye abụghị nsogbu, naanị ihe ọzọ nwere ike ibute nsogbu.
Daalụ, ọ rụrụ ọrụ zuru oke na Wheezy kwupụta Jessie, ma kwe ka m patch with the latest test openssh in stable.
Zaghachi Sergio Alonso
Debian Afanyekwa Nzọụkwụ Nzọụkwụ Nzọụkwụ
2 chinchi nsogbu na Krita